‘Miarena ary Ampaherezo ny Rahalahinao’—Lioka 22:32
Mandray Sakafo “Amin’ny Fotoana Mety” ve Ianao?
Ny Anjara Asan’ny Vehivavy eo Amin’ny Fikasan’i Jehovah
Velona ny Tenin’Andriamanitra ka Ampiasao
Inona no Nataon’i Jehovah mba Hifandraisana Akaiky Amintsika?
Henoy ny Feon’i Jehovah na Aiza Ianao na Aiza
‘Miarena ary Ampaherezo ny Rahalahinao’
FANTARO NY TANTARANTSIKA Nanampy Olona Maro Hahalala ny Marina ny “Eurêka-Drame”
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Ndebele Ndonga Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Aogositra 2014
NIGOGOGOGO nitomany i Petera rehefa avy nanda ho tsy nahalala an’i Jesosy. Nilaza taminy i Jesosy talohan’izay hoe: “Raha vao tafarina ianao, dia ampaherezo ny rahalahinao.” (Lioka 22:32, 54-62) Tiany hanampy ny hafa izy, na dia nila niady mafy aza mba ho tafarina. Lasa anisan’ireo andrin’ny fiangonana kristianina tamin’ny taonjato voalohany i Petera. (Gal. 2:9) Mbola afaka miverina ho anti-panahy koa ny rahalahy efa anti-panahy taloha. Ho faly indray izy ireo hanampy ny mpiray finoana aminy mba hatanjaka ara-panahy.
Mahatsiaro ho tsy misy ilana azy ny rahalahy sasany natsahatra tsy ho anti-panahy. Anti-panahy nandritra ny 20 taona mahery i Julio * any Bolivia. Hoy izy: “Nanomana lahateny sy nitsidika mpiara-manompo ary nanao ny asan’ny mpiandry teo anivon’ny fiangonana aho. Izany no nibahana teo amin’ny fiainako. Tampoka teo anefa dia tsy nanao an’izany intsony aho ka lasa banga be ny fiainako. Tena mafy ilay izy!” Efa anti-panahy indray izy izao.
“RAISO HO FIFALIANA LEHIBE IZANY”
Hoy i Jakoba mpianatr’i Jesosy: “Rehefa tojo fitsapana maro samihafa ianareo, ry rahalahiko, dia raiso ho fifaliana lehibe izany.” (Jak. 1:2) Ny fitsapana iaretantsika vokatry ny fanenjehana sy noho isika tsy lavorary no tiany horesahina eo. Nilaza izy fa mety hanana fanirian-dratsy, ohatra, isika na hanavakavaka. (Jak. 1:14; 2:1; 4:1, 2, 11) Mety hananatra antsika i Jehovah, ary mafy amintsika izany indraindray. (Heb. 12:11) Afaka ny ho faly foana anefa isika.
Marina fa mety ho nesorina taminao ny andraikitrao. Mbola azonao aseho anefa hoe manana finoana matanjaka sy tia an’i Jehovah ianao. Azonao dinihina koa hoe nahoana ianao no nanao an’ilay andraikitra. Te hahazo tombontsoa manokana fotsiny ve ianao, sa tia an’i Jehovah sy mino fa azy ny fiangonana ka tokony hokarakaraina amim-pitiavana? (Asa. 20:28-30) Raha mbola faly manao fanompoana masina ny rahalahy iray na dia tsy anti-panahy intsony aza, dia ho voaporofo amin’ny rehetra, anisan’izany i Satana, fa tena tia an’i Jehovah izy.
Nanaiky anarina i Davida Mpanjaka rehefa nanao fahotana lehibe, ka voavela ny helony. Hoy izy: “Sambatra izay voavela ny helony ary voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah ny fahadisoany. Sambatra ny olona tsy mieritreritra ny hamitaka.” (Sal. 32:1, 2) Nanatsara ny toetrany ny fananarana, ary azo inoana fa lasa nihanahay nikarakara ny vahoakan’i Jehovah izy.
Matetika no lasa mpiandry tsara kokoa ny rahalahy tafaverina ho anti-panahy. Hoy ny anti-panahy iray: “Haiko kokoa izao hoe ahoana no anampiana an’ireo nanao fahadisoana.” Hoy koa ny iray: “Sarobidy kokoa amiko izao ny tombontsoako manompo ny hafa.”
AFAKA NY HO ANTI-PANAHY INDRAY VE IANAO?
Hoy ny mpanao salamo: “Tsy hamerimberina hanameloka antsika foana noho ny fahadisoantsika [i Jehovah].” (Sal. 103:9) Tsy tokony hieritreritra àry isika hoe tsy hatoky intsony an’ireo nanao fahadisoana lehibe i Jehovah. Hoy i Ricardo, izay efa anti-panahy nandritra ny taona maro nefa natsahatra: “Kivy be aho noho ny fahadisoako. Tsy te hiverina ho anti-panahy aho nandritra ny fotoana elaela. Nieritreritra mantsy aho hoe tsy hahavita tsara intsony an’ilay andraikitra. Nieritreritra koa aho fa tsy ho afaka hampiseho amin’ny hafa intsony hoe mbola azo itokisana. Tia manampy olona anefa aho ka afaka nitarika fampianarana Baiboly, sy nampahery mpiara-manompo tao amin’ny Efitrano Fanjakana, ary niara-nanompo tamin’izy ireo. Lasa natoky tena indray aho ary tafaverina ho anti-panahy.”
Ampian’i Jehovah ireo rahalahy mba haniry indray ny ho anti-panahy sy hahita fifaliana amin’izany
Mety hanakana ny rahalahy iray tsy ho tafaverina ho anti-panahy ny lolompo. Tsara lavitra ny manahaka an’i Davida. Nialona azy i Saoly Mpanjaka ka voatery nandositra izy. Tsy namaly faty anefa izy na dia afaka nanao izany aza. (1 Sam. 24:4-7; 26:8-12) Nisaona izy rehefa maty an’ady i Saoly, ary nilaza fa ‘mahatehotia sy mahafinaritra’ i Saoly sy Jonatana zanany. (2 Sam. 1:21-23) Tsy nitana lolompo i Davida.
Ahoana raha tsapanao fa tsy rariny ny nahazo anao na vokatry ny fahadisoan-kevitra? Mety ho tezitra ianao, nefa aza avela hibahana ao an-tsainao izany. Natsahatra tsy ho anti-panahy, ohatra, i William any Grande-Bretagne ka tezitra be. Efa 30 taona teo ho eo izy no anti-panahy. Inona no nanampy azy tsy hitana lolompo? Hoy izy: “Namaky ny bokin’i Joba aho ary nampahery ahy izany. Nanampy an’i Joba hihavana tamin’ny namany telo lahy i Jehovah, ka azoko antoka fa hanampy ahy hihavana amin’ny anti-panahy koa.”—Joba 42:7-9.
TAHIN’I JEHOVAH IREO MIANDRY NY ONDRINY INDRAY
Ahoana raha ianao no niala tsy ho mpiandry ny andian’ondrin’Andriamanitra? Tsara raha saintsaininao ny antony nialanao. Noho ny olana maro nahazo anao ve? Sa nisy zavatra lasa zava-dehibe kokoa taminao? Sa ianao kivy noho ny tsy fahalavorarian’ny hafa? Na inona na inona antony, dia tadidio fa afaka nanampy ny hafa bebe kokoa ianao tamin’ianao anti-panahy. Nampahery azy ireo ny lahateny sy ny zavatra nataonao, ary nanampy azy hiaritra fitsapana ny fitsidihanao. Nampifaly ny fon’i Jehovah ny asa nataonao sady nahafaly anao.—Ohab. 27:11.
Ho voaporofo fa tia an’i Jehovah ianao raha mbola faly manao fanompoana masina
Ampian’i Jehovah ireo rahalahy mba haniry indray ny ho mpiandraikitra sy hahita fifaliana amin’izany. Mbola afaka “miezaka ho tonga mpiandraikitra” ianao raha niala na natsahatra tsy ho anti-panahy. (1 Tim. 3:1) “Tsy nitsahatra nivavaka” ho an’ny Kristianina tao Kolosia i Paoly mba hahalala tsara ny sitrapon’Andriamanitra izy ireo, ka ‘handeha mendrika an’i Jehovah mba hankasitrahany tanteraka.’ (Kol. 1:9, 10) Mangataha hery sy faharetana ary fifaliana amin’i Jehovah, raha voatendry ho anti-panahy indray ianao. Mila ny fanampian’ny mpiandry be fitiavana ny vahoakan’i Jehovah amin’izao andro farany izao. Afaka mampahery ny rahalahinao àry ve ianao ary mazoto hanao izany?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Aogositra 2014